Ngwa gụgharia egwu elektrọnik SomaFM bụ n'efu ugbu a | Androidsis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Egwu efu, Noticias, gụgharia
Anyị nwere otu dịgasị iche iche nke gụgharia ọrụ nke egwu n'etiti Spotify na Google Play Music guzo. Abụọ ngwa ọdịnala na ọrụ na-alụ ọgụ na-enye nke kacha mma na-anọgide na-emelitere na-akpali nnọọ mmasị ozi ọma dị ka mere na Spotify na ọhụrụ atụmatụ emejuputa na ya ọrụ dị ka ọ bụ nnọkọ, inwe «dj» onye na - ahọpụta egwu kachasị mma ka ị nwee ike ichegbu onwe gị banyere listi ọkpụkpọ na nzukọ na nnọkọ na ndị enyi, ma ọ bụ Ugbu a, nke ikpeazụ na vidiyo na pọdkastị nke ị ga - eche ihu na ihu na ọrụ ndị ọzọ na - egwu vidiyo dịka YouTube ma ọ bụ Netflix.
Banyere egwu, anyị enweela ozi na-atọ anyị ụtọ nke metụtara ọrụ egwu na-asọ asọ ama ama nke nwere ahụmịhe ya kemgbe ọtụtụ afọ, nke rue taa akwụgoro ụgwọ. Nke a bụ SomaFM ma site taa ị nwere ike iwunye ngwa ya na ngwaọrụ mkpanaka gị iji nweta egwu zuo ike, indy, ala, kọmputa ma ọ bụ ọbụna Celt. Ọ bụrụ na e nwere ihe na-apụ apụ banyere ọrụ a, ọ bụ maka ịnwe nkwanye egwu dị elu yana otu egwu egwu anaghị adịkarị na ọdụ ụgbọ ahịa kachasị. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ngwà ga-enye gị ọkwa egwu dị egwu mana na mpụga mpaghara azụmahịa ahụ nke ndị otu na ndị nka, ị nọ na chi taa.
1 Ngwa maka egwu puru iche nke di iche iche
2 Egwuregwu elektrọnik na nke kacha mma na-echere gị
Ngwa maka egwu puru iche nke di iche iche
A maara SomaFM nke ọma maka ịbụ ezigbo metụtara egwu elektrọnik, ma ọ bụ ihere ma ọ bụ ụlọ kachasị dị ọcha ma ọ bụ teknụzụ. Ọ bụghị naanị na ọ nọrọ ebe a, mana a na - ejikọta ya na egwu egwu egwu ọzọ ma ọ bụ n'okpuruala. Excellentzọ magburu onwe ya ịnweta ndị agha ọhụụ na ndị nka na-anaghị agakarị ọwa ahịa ndị ahụ ebe ụfọdụ oge nwere ike iyi "plastik".
Akwụwo ụgwọ ngwa gam akporo maka ogologo oge ma ugbu a ọ ga - abụ n'efu n’amaghị ihe kpatara ya ma ọ bụ whys. Anyị amaghịkwa ụdị azụmaahịa nke SomaFM, mana ọ bụ nnukwu ozi ọma maka ndị hụrụ egwu dị mma, ebe ọ bụ na ugbu a, ha ga-enwe ohere ọhụụ ọzọ ebe ha nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ụdị akwụkwọ ụdị niile. SomaFM pụrụ iche n’onwe ya na ndị pere mpe n’ime ọgbakọ ịgba bọọlụ ga-ama nke ọma ihe kpatara ya.
Egwuregwu elektrọnik na nke kacha mma na-echere gị
SomaFM na-apụta maka ịgba egwu indie na egwu elektrọn dị ka m kwuru wee si na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ dollar anọ ka ọ dị n'efu na Storelọ Ahịa Play. N'ezie, atụla anya ma ihe eji emepụta ma ọ bụ ngwa nwere ọmarịcha mma. O yiri ka ozugbo nke oge Froyo nke gam akporo, obu ezie na obughi ihe di nkpa na oru a, ebe obu na obu mgbe otu n’ime ọdụ ya malitere ịda ụda mgbe ọ gosipụtara ike ya zuru oke. Ọ dịghị mfe ịchọta ọdụ dị ka ndị a nke ọma site na ụdị, ewu ewu ma ọ bụ site na ọkacha mmasị ị nwere ike ịhọrọ.
I nwekwara ike ibe edokọbara nke mere na ị nwere ike ịzụta ha si Amazon ma ọ bụ zipu ha site na email ka ndị enyi gị. Nhọrọ ọzọ bụ inwe ike ịkekọrịta ihe ị na-ege site na Twitter ma ọ bụ ọbụlagodi ozi ederede. Enwere ekele na ọ gụnyere wijetị iji nwee ike ịgbakwunye ya na desktọọpụ ma malite ya ọdụ niile na ya.
Nwere a akụkụ pụrụ iche maka akụkọ SomaFM na njikọ iji zụta ngwa ahịa metụtara SomaFM dịka uwe elu ma ọ bụ jaketị. Nwere ike ịhọrọ ụda dị mma ka ọ ghara iri nnukwu ma ọ bụrụ na ịnọ n'okpuru njikọ data. Na-akwado 64k AAC-HE, 32k aacPlus na 128k MP3 iyi maka mma ụda kacha mma.
Ọ bụ ezie na ọ nweghị àgwà na interface ọdịyo mma na ngwa nke ụdị a na-ebute ụzọ, bụ nke na-ezobe ike dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị hụrụ egwu. A ozi ọma na anyị nwere ike inwe ya n'efu, yabụ egbula oge ịnwale ya, ọ gaghị emechu gị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwu efu » Ngwa egwu gụgharia SomaFM ghọrọ n'efu
Chịkọta ọkacha mmasị niile ịchọrọ na weebụ na Raindrop.io
Sony na-ewebata osisi USB ọhụrụ nke na-enye nkwado maka ọdụ ụgbọ mmiri Type-C na Type-A